Chorionique for tsindrona (GnRH) - China Ningbo Faharoa hormonina
Shuniu GnRH (mety ho an'ny ronono omby) Gonaderelin for tsindrona Ny pirenena kilasy fahefatra fitsaboina momba ny biby vaovao fanafody [Description] Izany vokatra dia fotsy na fotsy eny-Hivaingana-paharitry vongana na ny vovoka. [Andrakitra sy ny Ampiasao] entana izany dia afaka hanosika ny biby ny prepituitary fihary mba hanafaka ny follicle-mandrisika hormonina (FSH) sy ny luteotropin hormonina (LH). Izany dia mahasalama vokany eo amin'ny isan-karazany ny ovaire aretina, indrindra ho an'ny follicular kista. Izany ihany koa dia manana fiantraikany eo amin'ny toe-javatra izay afa-miala ny ...
Shuniu GnRH (mety ho an'ny ronono omby)
Gonaderelin for tsindrona
T dia national fourth class of new veterinary drug
Ity vokatra dia fotsy na fotsy eny-Hivaingana-paharitry vongana na ny vovoka.
Izany vokatra dia afaka hanosika ny biby ny prepituitary fihary mba hanafaka ny follicle-mandrisika hormonina (FSH) sy ny luteotropin hormonina (LH). Izany dia mahasalama vokany eo amin'ny isan-karazany ny ovaire aretina, indrindra ho an'ny follicular kista. Izany ihany koa dia manana fiantraikany eo amin'ny toe-javatra izay afa-miala amin'ny chorionic gonadotrophin (HCG) na LH. Mety hanasitrana ny famokarana atodinaina, tsy fahombiazan'ny follicle (nahemotra ny famokarana atodinaina,); dia azo ampiasaina amin'ny mpiara-solon-zaza, ary afaka mampitombo ny torontoronina markedly tahan'ny amin'ny estrous ny biby fiompy. Ankoatra izany, dia matetika ampiasaina ho an'ny tany am-boalohany Functional famerenana amin'ny laoniny ny ovaire aorian'ny fanaterana clinically (ao anatin'ny 40 andro aorian'ny fiterahana); dia mety ho ara-potoana ihany koa ny ampiasaina estrus, ara-potoana mba hanafohezany ilay solon insemination ny fanaterana elanelam-potoana io, mba hanatsarana ny bovine tanteraka fiterahana maro.
1.Curing ny follicular kista: ny nanolorana azy ho intramuscularly mampiditra Shuniu GnRH for 200 mcg ho nanasitrana ny tsarotra follicular kista; ny nanolorana azy ho intramuscularly mampiditra Shuniu GnRH ho 100 mcg ho nanasitrana ny malemy fanahy follicular kista.
2.It no nanolorana azy ho intramuscularly mampiditra Shuniu GnRH ho 100 mcg noho ny famokarana atodinaina, nanasitrana ny tsy fahombiazana.
3.It no nanolorana azy ho intramuscularly mampiditra Shuniu GnRH ho 100 mcg ho nanasitrana ny ovarian quiescence.
4. Efa nanolorana azy ho intramuscularly mampiditra Shuniu GnRH ho 100 mcg ho an'ny fampiroboroboana ny famokarana atodinaina.
5. Azo miara-ampiasaina miaraka amin'ny Cloprostenol Sodium tsindrona (PG) ho an'ny ara-potoana ho an'ny solon-insemination ronono omby (fa ny fampiasana sy ny levitra voatondro, dia jereo ny 19 faha pejy ao amin'ity boky ity, Shuniu GnRH (mety ho an'ny ronono omby) )
Efa voarara ho ampiasaina amin'ny fitomboana fisondrotana.
100mcg × 10 tavoahangy
Notehirizina tao amin'ny airtight toe-javatra eo amin'ny alokaloka (ambany 20 ℃).
Hanina ho an'ny 7 andro, ronono nandritra ny 12 ora.
Previous: Estradiol Benzoate tsindrona (Estrogen)
Manaraka: LHRH-A2 for tsindrona Bovines & kisoa
Best Quality Human Chorionic chorionique
Factory chorionique Alarelin
Free Chorionic chorionique
chorionique Fa tsindrona (Gnrh)
Human Chor ionic chorionique
Human Chorionic chorionique Elisa
bevohoka Mare Serum chorionique